पत्याउन अति मुस्किल : यस्ति युवती क्षणभरमा यस्ती कसरी !
गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » पत्याउन अति मुस्किल : यस्ति युवती क्षणभरमा यस्ती कसरी !
नयाँ दिल्ली । पत्याउन अति मुस्किल लुक्स बाहिर आएको छ । उनी हुन् बिग बोस ओटीटी विजेता दिव्या अग्रवाल ।
उनको तस्विर बाहिर आएपछि सबै चकित बनेका छन् । उनी विजय भएको धेरै भएको छैन । यसैले अझै उत्सवमा डुबेकी छन् । साथीहरुसँग सेलिब्रेशन देखि फोटोशूट सम्म चलिरहेको छ ।
उनी हरेक दिन सोशल मिडियामा आफ्नो तस्वीरहरु साझा गरीरहेकी छिन्। यसै बीच उनले आफ्नो एउटा यस्तो तस्बिर सेयर गरेकी छन् जसमा जो कोही दिव्या नै हो भनेर पत्याउन सक्दैनन् । तर उनी बूढो मान्छेमा रुपान्तरण भएकोमा सबै स्तब्ध हुनेछन्।
दिव्याको यो नाटकीय रूपान्तरण लोकप्रिय वेब श्रृंखला कार्टेलसँग सम्बन्धित छ। दिव्यालाई तस्बिरमा बूढो व्यक्तिको नजरमा देख्दा उसलाई चिन्न सम्भव छैन।
उनले यो फोटो पोस्ट गरेर आफ्नो लुकको बारेमा पनि कुरा गरेकी छन्। उनी लेख्छिन् कार्टेल हेरेपछि मेरो मुड। उनले यो श्रृंखला बनाउने टीमलाई ट्याग गरेकी छिन् । भनेकी छिन् उनीहरुको सफलतामा बधाई दिने मौका पाइएन ।
सम्पूर्ण शो अति प्रसंशयुक्त थियो। एकता कपूर महोदयले मलाई विश्वास गर्नुभएकोमा धन्यवाद। यो भूमिकाले सिनेमाप्रतिको मेरो प्रेम र जोश अझै बढाउँछ । जसलाई तपाई पहिचान गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो।
घण्टाको लागि त्यो मेकअप कुर्सीमा बसेर, म आफैं म को हुँ भनिरहे । म माथि उहाँको आशीर्वाद बर्षा भएको छ । यसैले धन्यवाद । दिव्याले उनको कृत्रिम मेकअप को भिडियो साझा गरेकी छन् ।
उनले लेखेकी छिन् मैले मेरो जन्मदिन ४ डिसेम्बर २०२१ लाई यसरी मनाएँ। साथीहरु, परिवारका सदस्यहरु मेरो लागि घर मा पर्खिरहेका थिए । म त्यो दिन कार्टेल शुरू हुने कुरामा धेरै गर्व गरेकी थिए ।
यो मेरो कृत्रिम मेकअप हो । तर कलाकारीता अभिनयमा देख्न सक्नुहुन्छ । दुई घण्टाका लागि नाक बाहेक सबै इन्द्रिय बन्द थिए । म शान्त थिएँ तर मेरो मुटु छिटो धड्कन थालेको थियो । अब चाँडै उनको यो रुप सिरिजमा हेर्न पाईनेछ । सफलताको शुभकामना !!